နိုင်ငံတော်အလံမီးရှို့ခိုင်းသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ မကျေနပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » နိုင်ငံတော်အလံမီးရှို့ခိုင်းသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ မကျေနပ်
နိုင်ငံတော်အလံမီးရှို့ခိုင်းသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ မကျေနပ်
Posted by blacklover on Oct 22, 2010 in Myanma News, News | 16 comments
အထက်အမိန့်အရ ဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံမှ နိုင်ငံတော်အလံအား ချက်ချင်းဖြုတ်ချ မီးရှို့ခိုင်းသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့ပေါ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးများတွင် လွှင့်တင်ထားသည့် နိုင်ငံတော်အလံအား ယနေ့ မွန်းလွဲ(၃) နာရီအတွင်း အပြီးမီးရှို့ခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“နိုင်ငံတော်အလံတွေကို ဖြုတ်ချပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ် (၃) နာရီထိုးမှာ အပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး အရေးပေါ်လုပ်တာ၊ အားလုံးက စိတ်မကောင်းကြဘူး၊ အလံတွေကို ဘာကြောင့်ဖြုတ်ချ မီးရှို့ခိုင်းတယ်ဆိုတာ မသိရဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အလံများကို ချက်ချင်းဖြုတ်ချမီးရှို့ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ပေးလာမည့် အလံမရမချင်း အခြားမည်သည့်အလံမှ တင်ခြင်းမပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့ပေးမဲ့အလံ မရောက်မချင်း ဘယ်အလံမှ မတင်ရဘူး အထက်ကအမိန့်လို့ ပြောတယ်၊ အလံကို ဖြုတ်ချပြီး ခဏသိမ်းဆိုတော်သေးတယ်၊ အခုလို လုပ်ခိုင်းတာ လုံးဝကို နားမလည်ဖူး” ဟု ပြောသည်။
အခု မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်အလံသည် အနီရောင်နောက်ခံ ဘက်ဝဲဘက်ထောင် အပြာရောင်လေးထောင့်ကွက်ပါရှိပြီး အဆိုပါ အပြာရောင်လေးထောင်ကွက်အလယ်အတွင် အဖြုရောင် စပါးနှံခွေးသွားစိပ်တို့ကို ကြယ်ဖြူ (၁၄)လုံးက ဝန်းရံထားသည့် အလံတော်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းအလံတော်ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၃)ရက်နေ့က စတင်ပြီး ယနေ့ မနက်ပိုင်းအထိ အသုံးပြုခဲ့သည့် အလံတော်ဖြစ်သည်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အမှတ် (၁) စက်မှူဝန်ကြီးဌာနက ရန်ကုန်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကို စစ်အစိုးရရဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် အတည်ပြုထားသည့် နိုင်ငံတော်အလံသစ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ အလံတစ်သိန်းခွဲ အချုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ အပ်ဖို့လည်း ညွန်ကြားထားကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
black lover has written 11 post in this Website..
View all posts by blacklover →
မကျေနပ်တာကတော့မကျေနပ်ဘူးပေါ့… ဒါပေမဲ့လည်း ကြိတ်ကြေကွဲနေကြယုံပဲလုပ်နိုင်တယ်လေ ။ နှမ်းတစ်ပွင့်နဲ့ဆီမဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးမို့ အားလုံး သိသိကြီးနဲ့ငြိမ်နေကြတာပါ ။
ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းပေါ့… အခုလိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး…..
မကြားဖူးပါဝူးဂျ ……. ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို မီးရှို့ရတယ်ယို့ ….. မသုံးရင်ပြတိုက်ပို့ထားပေါ့ ဘာယို့မီးရှို့ရတာယဲဂျ ….. ဒါချို သုံးမရတော့တဲ့ တပ်ဂျုတ်ကြီးတွေယဲ မီးရှို့ပစ်လိုက်ပေါ့ဂျ …….
ယတြယာကို လက်ကိုင်ထားကြတဲ့ မင်းတို့တစ်တွေ တန်ပြန်သက်ရောက်ပြီး အပူမီးတွေလောင်ကြပါစေ..။ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး မသာပေါ်ကြပါစေ..။
ယတြာယာကို လက်ကိုင်ထားကြတဲ့ မင်းတို့တစ်တွေ တန်ပြန်သက်ရောက်ပြီး အပူမီးတွေလောင်ကြပါစေ..။ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး မသာပေါ်ကြပါစေ..။
အရင်ကလွှင် ့တင်ခဲ ့တဲ ့ကျွန်တော်တို ့ရဲ ့မြန်မာနိုင်ငံအလံဟာကျက်သရေရှိလှပါတယ်။
အဓိပယ်လည်းရှိလှပါတယ်။အလံမှာပါတဲ ့ကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံးကဘာ
ကိုကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာကလေးတွေသင်နေတဲ ့ပြဠာန်းအုပ်မှာတောင်ရှိနေပါတယ်။အခုလက်ရှိလည်းသင်ကြားနေကြရပါတယ်။သူတို ့ဒါကိုနားလည်တတ်ကြရဲ ့လား။ခွေးမျိုးတို ့ရဲ ့လုပ်ဇာတ်တွေဘဝဆက်တို င်းမီးလိုပူကြပါစေ။
အလံချခြင်းကို အင်္ဂါ သားကပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ….အလံတင်ခြင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးသားကပြူလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တနိုင်ငံလုံးသို့ ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရသည်။
အရမ်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်….နောက်လူတွေဆိုရင် ရှေးက သုံးခဲ့တဲ့ အလံက ဒီအလံပါလို့ ပြစရာတောင်မကျန်ခဲ့တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်….. မီးရှို့မှပဲ ဖြစ်မှာလား……. အဲလောက်အယူသည်းဖို့မလိုဘူး ထင်ပါတယ်…….. စိတ်မကောင်းစရာပဲ…..
ဒိ သတင်းကြီးကြားရတာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲ ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လေးစားလာခဲ့တဲ့ အလံကိုဖြုတ်ချ လိုက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုတောင် ထင်မိသေးတယ် သူတပါးလက်အောက်ရောက်သွားပြီလားလိုလေ ။ ကျွန်ဘဝက နေ ခက်ခက်ခဲခဲ ရထားတဲ အလံလေးတော့ သွားပါပြီဗျာ။
အလံကိုတော့မီးမရှို့သင့်ဘူးထင်ပါတယ် မသုံးရင်မီးရှို့ရမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်အစိုးရကို မသုံးလို့ သမ္မတအစိုးရ တက်လာရင် တပ်မတော်အစိုးရကို မီးရှို့မှာလားဟင်။ အရင်အလံက တကယ့်ကို အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျက်သရေ ရှိပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရ တွေ့ရ ငါတို့နိုင်ငံအလံဆိုပြီး ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ အခုအလံက တခြားနေရာမှာတွေ့ရင် အာဖရိကအလံလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ဟီး ပြီးတော့ ဘယ်နေ့သားအလံချ ဘယ်နေ့သားအလံတင်ဆိုပြီး ယတြာကလုပ်သေးတယ် တစ်ခုဖြုတ် တစ်ခုတင်ရင် တစ်ခုတော့ ခိုးရမှာပဲ ဒါဆိုကြံ့ခိုင်ရေးကတော့ အလံခိုးပေါ့ ဟုတ်လား ခွိ